FIKAMBOHANA | RayHaber
Navoakan'ny gazety TCDD General Manager Ali İhsan Uygun mitondra ny lohateny hoe Ler Services Services Manam-pankatoavana avy amin'ny TCDD Ra dia navoaka tao amin'ny gazetin'ny gazety Raillife tamin'ny volana Desambra. Ity ny lahatsoratra momba ny TCDD GENERAL MANAGER UYGUN [More ...]
Notanterahina tao amin'ny IETT Kagithane Garage ny fivoriana voalohany an'ny mpitantana IETT sy ireo mpamily miasa ao amin'ny Bus Public Private. Nanazava ny olan'ny mpamily sy ny mpitantana IETT ny mpamily 100. Fitateram-bahoaka any Istanbul [More ...]
Ny tale jeneralin'ny EGO Nihat Alkaş, ny tale jeneraly lefitra Fatih Eryilmaz dia nihaona tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny kaoperativa misahana ny fitateram-bahoaka tsy miankina avy amin'ireo distrika. Alkaş, nandritra ny lahateniny tamin'ny fivoriana, "Ny andraikitra lehibe indrindra ataontsika, [More ...]
TCDD Tasimacilik AS dia handray mpikarakara 52! Ny fandrefesana, ny fifidianana sy ny toerana fametrahana an'i OSYM “52 / 2019 KPSS [More ...]
Raha mifanaraka amin'ny fifanarahana izay natao teo anelanelan'i UGETAM sy IETT, dia homena ny fiofanana sy ny fanamarinana ny mpamily rehetra, indrindra ny mpiasa IETT. Ao amin'ny akademika hatsangana dia hiofana ara-potoana daholo ireo matihanina fitaterana manerana ny firenena. [More ...]
IETT Tale jeneralin'ny IEST amin'ny fitaterana natolotry ny mpamily fiara fitateram-bahoaka, 2019 tamin'ny taona mandritry ny resaka miresaka ny sazy an'arivony amin'ny chauffeur 294. Istanbul Electric Tram ary Tunnel Work (IETT) [More ...]
Ankara amin'ny fitaterana; Tao amin'ny atrikasa Ulaşım Ankara Transportationind Transportation hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted hosted discussed, were were were discussed Fanokafana ny Ben'ny tanànan'ny Ankara Metropolitan Mansur Yavaş [More ...]
Ny minisitra Turhan dia nanadihady ny sehatra famokarana ny tetikasan'ny fiaran-dalamby nasionaly
Ny Minisitry ny Turhan dia nanadihady ny sehatra famokarana tetik'asa fanalam-pirenena mandeha amin'ny herinaratra; TÜVASAŞ Tale jeneraly sy Tale Prof.Dr. Nihaona tamin'i İlhan Kocaarslan teo am-baravaran'ny TÜVASAŞ Protocol, fiaran-dalamby herinaratra nasionaly ny minisitra Turhan [More ...]
20 masoivohon'ny Repoblika Tiorka dia any TÜVASAŞ
20 izay hita ao Sakarya ao anatin'ny ambaratonga iraisam-pirenen'ny diplaomaty iraisam-pirenena nokarakarain'ny Vaomieran'ny indostrian'ny indostrian'ny tsy miankina sy ny mpandraharaha (MUSIAD) dia nitsidika an'i TÜVASAS sy ambasadaoron'ny firenena. Maneho ny hafaliany amin'ny fitsidihana TÜVASAŞ [More ...]
Miara-miasa amin'ny lalamby Makedonia i TCDD
Nihaona tao Ankara ny tompon'andraikitra sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny TCDD fitateram-pitaterana ao amin'ny Repoblika Tiorka Avaratra. Nisy fivoriana natao hanombanana sy hampitomboana ny fifandraisan'ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny lalamby roa tonta. [More ...]
Toerana fanaovan'ny IETT avy any Istanbul
Raha tsy tokony hipetraka ny seza bisy amin'ny bus, ”ny fihodinam-bokatra izay tsy mitazona ny bakteria dia azo hatsaraina”, tokony apetraka eo anoloan'ireo bisy ny fitaovana E EDS ary tokony hapetraka ny sazy mandeha ho azy noho ny fanitsakitsahana ……. Ireo torohevitra ireo dia avy aminao. Ny tranokala fanaon'ny IETT (inovasyon.iett.gov.tr) dia nanangona soso-kevitra mahaliana avy amin'ireo mponina ao Istanbul. [More ...]
Mansur Yavaş, Ben'ny tanàna ao Ankara Metropolitan, dia nanambara fa hividy fiara 300 vaovao amin'ny EGO ry zareo. Yavaş dia nanamarika fa sarotra ny fametrahana rivo-jiro na tetikasa metrobus noho ny fandalovana. [More ...]
TCDD 2 Billion 558 Million TL Fandrasana Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) nitombo fatiantoka. 2 miliara 558 tapitrisa Railway an'ny fanjakana, izay nivadika ho lavaka mainty ny tetibola nandritra ny taona maro [More ...]
Izgir Wagon fiaran-dalamby, lamasinina Anatolia Blue Central, East Express, South Express, Lake Van Express, Fiaran-dalamby Konya Blue ary Cukurova [More ...]
Manomboka amin'ny DTD mankany TCDD Taşımacılık A.Ş. Tsidiho ny tale jeneraly Yazıcı; TCDD Transportation Co. Kamuran Yazıcı, izay voatendry ho mpitantana foibe sy Filohan'ny birao mpitantana dia notsidihin'ny DTD [More ...]